16 ဇူလိုင်လ 2019
စတင်ပြုလုပ်ခြင်းယဉျကြေးမှုအက္ခရာများ, epilogues နှင့် epitaphsNaiara Galarraga, Pedro Sanchez နဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝမ်းနည်းမှုသို့ထိုး ..
ကမ္ဘာ၏အစိုးရများကစစ်တိုက်ခြင်းငှါနန်းစံ "စိတ်ပျက်လက်ပျက်" ကာကွယ်ပေးနိုင် .. ကျွန်ပြုမှုလို့ခေါ်တဲ့နှစ်ဆယ်ရာစုအတွက်စည်းလုံးခြင်းနှင့်တစ်ဦး atypical ကင်ဆာနှင့်အတူအဆုံးသတ်ရန်! ။
11, ဇွန်လ 2018 Belz အက္ခရာများ, epilogues နှင့် epitaphs, စပိန်နိုင်ငံရေး 0
Naiara Galarraga Gortázar (ဂျာနယ်လစ် - El País)အဘယ်အရာကိုထံမှများစွာသောဆိုတဲ့အတွေးများအတွက် မမြင်ရတဲ့အထီးကျန် ငါတို့သည်ရီစရာခဏနှင့်ရှားပါးဝိရောဓိများ၏ဦးနှောက်ကဒီနေ့လယ်နေမကောင်း softens ရသောပတ်ဝန်းကျင်အစိုဓာတ်ကိုထုတ်လုပ်စိုးရိမ်စိတ်၏မြင့်ဒီဂရီမှအကျိုးဆက်ဖြစ်လိမ့်မည်သည့်တစ်ဦးတက်ကြွသည်းမခံအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအနည်းကိန်းအမြင်ကနေနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်သိရှိစေရန်ကြိုးစား, မည် ထို့အပြင်အများကိန်းပင် "cataplines" ဧရာမအာဏာကိုရသောသူသည်နိုင်ငံရေးအကိန်းဂဏန်းများရှိပါတယ်အခါများစွာသောစပိန်၏ငြင်းပယ်ခံရ၏ခံစားချက်ကိုယ်စားပြုအခြားသောအခြေအနေများအတွက်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်, ရှင်းလင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်သောမတတ်နိုင်ဝံ့မည်မဟုတ် တစ်ဦးမှတံခါးကိုမဖွင့်နှင့်အတူလုပ်ဖို့နည်းနည်းရှိသည်သောကိစ္စများအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမရ ဝင်လာနေထိုင်ခြင်း အပူတပြင်း, ဝမ်းနည်းမှုအတွက် mired ကိုးကွယ်ရာပေါ့စကိုမထားလျှင်သူကကျိန်းသေ impact ကျွန်တော်စပိန်ရှိပြဿနာများUp ကိုတခါအပေါင်းတို့နှင့်တကွများအတွက်ဧရာမဝင်လာနဲ့ဂရိ, အီတလီနှင့်ပြင်သစ်ကမ်းရိုးတန်းမှာခေါ်ဆိုခကိုခွင့်ပြုမထားတဲ့၏ယခု upwelling regularize ။
A Pedro Sanchez"က Short" ဟုခေါ်စပိန်၏နယူးသမ္မတ, (နေချိန်မှာ) "ရက်စက်တဲ့" ဟုအဆိုပါအခွန်ကျနော်တို့အသားနှင့်အတူဆာလောင်မွတ်သိပ်အစာကျွေးခြင်းဖြင့်ရှေ့ဆက်နှင့်နောက်ကွယ်မှထိုး, ယခုမှာ "ရှမာရိလူ" ဦးမည် ဘတ်ဂျက်၏မရှိခြင်းကြောင့်အများကြီးချက်ပြုတ်နှင့်ရေငတ်သောစပျစ်ရည်သို့မဟုတ်တောက်ပဓာတ်သတ္တုရေမသောက်ရ, သမုဒ္ဒရာကနေလာသောသူအပေါင်းတို့, သင်္ဘောရှိမရှိပါဘူး ကုံအဆိုပါ ကို Nautilus သို့မဟုတ် Poseidon မှာကြင်နာမှုယင်း၏ပဲ့တင်သံကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်းအတွက်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်အာမခံချက်ဘဲလျက်နေစဉ်တွင်, အကယ်စင်စစ်, သငျသညျလအဆုံးမှာသင်တို့သည်ညည်းတွားအောင်သောသူတို့၏ကြက်သွန်တစ်ဦးလစာ, paid သောမိမိ compatriots အများအပြားမှ infuriating တစ်ခုခုအတူတူငါပေးမည် နှင့်ဖြစ်ကောင်းဒီအစဉ်အဆက်မြင့်တက်တွေ့ကြုံခံစားသွားဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အနည်းငယ်ခေါ်ဆိုမှုနှင့် host ကယ်ဆယ်ရေး, ထိုလှေ, သင်္ဘောများသံချေးတက်သံ, စကိတ်စီးခြင်း, ရော်ဘာ duckies နှင့်ဖျာမတိုင်မီကတည်းကအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ကြေညာကြောင်းတွေးမိ ဒါကြောင့်မိုးရွာကြောင်နဲ့ခွေးရပ်လျှင်အားလုံးသိသောကြောင့်ပလပ်စတစ်ကိုပင်မိုက်မဲနိုင်ငံရေးသမားများနှင့်အထင်အမြင်ကြီးသောရွံမုန်းတဲ့ဝန်ခံ, ဤနွေရာသီ quintupled မှ သာ. ကြီးမြတ်သည်လူ့ထောက်ပံ့ရေးနှင့်လျော့နည်းဝယ်လိုအား rhythms နှေးကွေးသည့်စီးပွားရေးနိယာမလည်းမရှိ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုဖို့လမ်းအပေါ်အမှန်တကယ်ကန့်သတ်လုပ်အားအချိုးစာရင်းဇယားများတွင်စီးပွားရေးနယ်ပယ်ထဲမှာကြီးထွားမှု, နှင့် အများဆုံးလက်တွေ့ကျတဲ့အတွက် join လိုကျသောအခါမကြာမီရောက်လာ အဖွဲ့ချုပ်စစ်သည်တော် နှင့်သူတို့အဘို့စကားလုံးများ၏အနုပညာနှင့်အတူ (ထို snot သုတ်ဖို့အစေခံမထားဘူးမဟုတ် ကျွန်တော်ပညာတတ်ရေးဆွဲရေးအတွက်ငြိမ်းသောအသုံးမဝင်တော့အပြောအဆိုအတွက်သုံးပါဟူသောအသုံးအနှုနျးမြားနှငျ့ bellicose သေံများအတွက်ဝမ်းနည်းပါတယ်, အတန်ငယ် jocular ) .. နှင့်မော်ကွန်းအန္တရာယ်နှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအသက်ရှင်ရန်သူမ၏လာအောင်မလိုအပ်သောငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု, ယခုစိုက်ပျိုးကြသည်ရှိရာတွင်းက၎င်း၏လူဦးရေ shrift ထုတ်ပယ်သောသူတို့နိုင်ငံတွေ၏အကျင့်ပျက်ခေါင်းဆောင်များတက် fuck ဆိုတဲ့သွားပါပြီ။ သူများသည်အစိုးရသောမင်းတို့ obstructing များအတွက်ချုံယိုယွင်း, ဟောင်းငှက်ပျော mouthing ကာကွယ်ထားတဲ့မလိုလားအပ်သောကျွန်စနစ်ကိုမြှင့်တင်ရေး, sulky နှင့်ရောဂါများအကြားနေထိုင်နေဆက်လက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရောင်းခြင်း, မှာပါတဲ့ဓာတ်သတ္တု "ဖြစ်ပါတယ်-coltan" ကလေးစစ်သားနှင့်အတူမိမိတို့ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့သူကိုကျိန်ဆဲ ချပင်ကိုကြည့်ရှု။
အစိုးရများ plutocracy သငျတို့သကိုယ်ကိုကိုယ်အဆိုပါခွေုံစကားအားဖြင့်သိမ်းသွားစေခြင်းငှါအကြောင်းလေးစားဖွယ်အမည်များ, beberos တစ်ဦးပြီးနောက်အသံထွက်မတိုင်မီmojaísကြောင်းခံစားချက်များကို '' နှင့်အတူ gracelesscabernet sauvignon"ဤစိတ်ကူးညစာစားပွဲများတွင် NGO အဖွဲ့, S ကိုဘယ်တစ်ဦးရန်ကီးအဖြစ်ယာယီစိတ္တဇအားဖြင့်အချို့သောကာလအချိန်ခေါင်းဆောင်များသဘောတူနိုင်လျှင်သလောက်အခြေချနေထိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်ယခုလူမျိုးနှင့်တရားဝင်မှု, ရဲဘော်အချင်းချင်းသွေးသောက်စိတ်ထားနှင့်တန်းတူညီမျှမှု၏အခှငျ့အရေးမြား၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုဝှေ့ယမ်း, ရောင်စုံအလံတွေနဲ့ vitores atesoraís သူပိုသောသင်္ဘောကိုထောကျပံ့မထားဘူးသူအီတလီ, နှလုံးဆုံးရှုံးဖို့အကြောင်းသူဂရိ, ကျမ်းပိုဒ်ကိုထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြင့်တော်လှန်ရေးအခွန်မခံမငြီးငွေ့သူ Turk, ဘူဒါပက်အတွက်ပါစေတစ်ဦးတည်း, ဘာလင်သို့မဟုတ် Warsaw ကိုတှငျနထေိုငျပါဘူး နယ်စပ်ကန့်သတ်ပြဋ္ဌာန်းကြောင်းပြင်သစ်, စပိန်ကျွန်တော်မှတ်ချက်ချအပေါင်းတို့နှင့်သည်အတိုင်းထားပေးပါ့မယ်ငါ, ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံမဟုတ်ပေမယ့်ထာဝရ Zapatero ပုံစံမျိုးရယူကြောင်း "နိုဘယ်လ်" နဲ့သန့်ရှင်းစေခြင်းဖြေရှင်းနည်းသန့်ရှင်းစေသည်ဟုမျက်စိကန်းနှင့်ရီစရာသူသည် ကမ္ဘာကြီး, သိတယ်ကပ်ရောဂါသို့လှည့်မတိုင်မီမကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့နှင့် Segui နေဖြင့်၎င်းတို့၏ရက်စက်မှုနှင့်အတူစိတ်မစေပြီသူမလိုလားအပ်သောအာဏာရှင်တွေသင်ျဂွိုဟျဖို့ "diggers" လွယ်ကူချောမွေ့ရရန်ဖြစ်ပါသည် r, ဂုဏ်သိက္ခာအကူအညီအထောက်အပံ့များနှင့်အတူနေထိုင်နေစတင်နိုင်ရန်နည်းပညာဖြင့်လိုက်ပါသွားတူညီရေးကိရိယာများကိုအသုံးပြီးတော့, တတိယအမျိုးအစားတစ်ခုငြိမ်းချမ်းရေးနေထိုင်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုနှင့်အတူရောနှောကျွန်စနစ် "ကိုအလှဆင်" ချင်သောသူတို့အားကျေးဇူးတင်ဖြစ်ဖို့ပိုဘာမျှမရှိခြင်း, အခမဲ့အင်တာနက်ကပေးသို့မဟုတ် တောင်းဆိုအနီးဆုံး port ကိုတိုက်ရိုက်လိုင်းအပြင်ကငွေရတတ်သောသူသည်ဥရောပ, လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုစပိန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ရန်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီနှင့်လိုင်စင်ကိုရောင်းလိုက်ပါတယ်။
ထိုကွောငျ့, naiara Galarraga, အဲဒီမှာသမျှအဘယ်သူမျှမဝေဖန်သင်တို့အဘို့ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သင်ပြုသမျှကိုကျေးဇူးတင်ပေမယ့်ထိုကဲ့သို့က "geophysicist နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေး" ယခု 600 ပုကြိုဆိုမနက်ဖြန် 790 နှင့် .. ပြီးတော့ !, စေ့ဆျောသောအရာကိုတစ်ဦးတစ်ခုလုံးကိုတိုက်ကြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပါ အဆိုပါအသံတိတ်ကျူးကျော်အစီအစဉ်အတွက်ဂြိုလ်သား "ကျွန်တော်တို့အားလုံးအခြားဝဠာကိုမှကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပေးဖို့အတူတကွပိတ်ဖို့, ဒါမှမဟုတ်ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုက၎င်း၏စျေးကွက်၏တဦးတည်းအတွက်အောင်မြင်ပြားချပ်ချပ်ထုပ်နှင့်စျေးပေါကြယ်များနှင့်အတူအကျင့်ပျက် scoundrels ဤအခန်းဆက်ဖို့တင်းပါးတစ်ကန်ကိုချေမှုန်းပစ်ဖို့ရှိသည်သည်အထိ ကို, သင်၏ပျော်စရာလုပ်သူကိုခွေးလှေး ", သူတို့ရဲ့ပုံကြီးချဲ့အခွန်အခများနှင့်အတူပြည်တော်ပြန် feeds နှင့်နောက်ဆုံးမှာနှေးပေါက်ကွဲနှင့်အတူထုပ်ပိုးနေတဲ့ V ကိုကော်လံဖြစ်ငြိမ်းပါဘူးဖြစ်သောပဉ္စမဒြပ်စင်, ပေါက်ကွဲပါလိမ့်မယ်သူကလူ ဒါကြောင့်ရရန်ဂြိုလ်သားရည်မှန်းချက်နှင့်သည်းခံခြင်းတဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးတောင်းဆိုခဲ့သည်။
ထိုအအတောအတွင်း၏ပြီးပြည့်စုံသောအကျင့်ကိုကျင့် "Azorín"ခြော, သူတို့ကိုနားလည်မှုလွဲမှားခြင်း၏ဤဇာတ်လမ်းထဲမှာအများဆုံး Illustrious အစိုးရဝါသနာအိုးတကိုကိုယ်စားပြုသည်လိုလားတည်ရှိသည်နှင့်မှတ်တိုင်များသို့မဟုတ်ပုံပမာမပါဘဲ၎င်းတို့၏ခရီးစဉ်၏ကညာအပေါင်းအဘော် wowing စောင့်ရှောက်ဖို့ပြုံးပြတယ်နှင့်မဆိုမြင်ကွင်းများပျောက်ဆုံးဘဲကျနော်တို့ရဲ့ထူးခြားဖြစ်ဟန်ဆောင်, ဝေးနေဖြင့် အချိန်, စပိန်နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏သမ္မတ, ဒွန် Pedro Sanchezယခုပင်သင်သည်အစားအချိန်ကြာမြင့်စွာနေရန်မလိုအပ်သောသူအပေါင်းတို့ "အတင်းအဓမ္မခရီးသွားဧည့်" နေရာရှိပါက "ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးထက်ကက်သလစ်" အဲဒီကဲ့သို့အသင်ပိုမိုဖြစ်သောကြောင့်လူမမေးလမ်းဖြင့်သူတိုင်ပင်ခဲ့ကြနိုင်သည့်စတင်နေပြီဘယ်ဟာ ခရစ်ဝင်ကျမ်းကနေမြင်ကွင်းများနှင့်အတူအလှဆင်ရင်တောင်မိုး။
naiara ကျနော်တို့ကိုသူတို့မှလောင်စာဆီပေးသောအခါမှသင်၏ခြေရာနောက်တော်သို့လိုက်ကြပါပြီ "ရိုဟင်ဂျာလူဦး"များစွာသောဆုတ်ယုတ်မှုပြီးနောက်အချိန်အထိလည်းအသေးစိတ်အတွက်ဤနေရာတွင်ကမ္ဘာတွင်မျိုးပွားနိုင်ပြီ ဗင်နီဇွဲလားအစုလိုက်အပြုံလိုက်။ အခုတော့အချိန်ရဲ့အချို့ think, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးများ၌သင်တို့ကိုမှဝင်ရောက်စွက်ဖက်သည်ဟုမရှိဘဲ, ငါတို့ကအချိန်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ချင်ပါတယ် မောင်းဆွဲ မဟုတ်ရင်သူကအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေမယ့်လူမှုရေးအနာ၏အသွေးကင်းစင်ဖို့လုံလောက်တဲ့မိုဃ်းကိုရွာစေ, ကြှနျုပျတို့ဘာမျှပြဿနာမဟုတ်သလိုလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားသခငျ့ဂတိတျော၏အဓိပ္ပာယ်ကုစားပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းစောငျ့ရှောကျသညျ့အခါငါတို့ဝိညာဉ်ပျံ့နှံ့ဘယ်တော့မှကတည်းက desagravios, မျှော်လင့်ချက်။
De las personasallamar señorías de la España “vacía” de ideas, que dicen están ahí para servir.. y lo “ costoso, inservibleseinsufribles que pueden resultar ser “. 14 ဇူလိုင်လ 2019
Cuando la prisión se convierte en una habitación de hotel, el delito crece y las víctimas padecen el desinterés de España por su gente y sus turistas 11 ဇူလိုင်လ 2019
¿ Escándalo por el incumplimiento laboral universitario ? 10 ဇူလိုင်လ 2019
Sobre la retahíla de algunas reivindicaciones que andan camino de eternizarse 8 ဇူလိုင်လ 2019
Entre “ camellos “ y “ elefantes “ : papelinas, recetas médicas y2tipos de esclerosis4ဇူလိုင်လ 2019
Asumiendo responsabilidades, pero no de boquilla entredicha entre copiosas barbas, rasuradas caras, amargadas sonrisas y serios labios con vestigios de recién pintados. 1 ဇူလိုင်လ 2019
¿ Tantos impedimentos hay para llevar Justicia al pueblo mundial o existe un exceso de cobardía ? 26, ဇွန်လ 2019
24 အောက်တိုဘာလ, 2018 1
ဒီartículoTweetSiသတိပေး Share အကောင့် mirasen အမှတ်တရများတဲ့ချည်နှင့်အတူထားကြပါတယ်ဖြစ်ကောင်းဤမျှလောက်ဒဏ်ဍာရီအကွံဉာဏျမဟုတျပါဘူးအခွအေနေထုတ်လွှတ်မှု: မည်သည့်တိုင်းပြည်တွင်အကြီးစားစူပါမားကတ်အစားအစာ [ ... ]
17 ဒီဇင်ဘာလ 2018 0
ဘဝက start နှင့်ကျန်းမာရေးမိသားစုကျန်းမာရေး + ပညာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ဦးကပြည့်စုံကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့်အတူ Next ကိုအခန်း VIII ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ - ဤartículoTweetVOXအခန်း VI ကိုမျှဝေပါ။ ထူးခြားတဲ့ကျန်းမာရေးကဒ်ကိုသာကာကွယ်ဆေးထိုးအချိန်ဇယား, [ ... ]